भाेलि देशव्यापी आम हड्ताल गर्ने प्रचण्ड-नेपाल समूहकाे घाेषणा : भोलि के-के खुल्छ के-के बन्द हुन्छ ? – Online Nepalaja
February 3, 2021 99
काठमाडौं: नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिको विरोधमा बिहीबारका लागि आह्वान गरेको आम ह’ड्तालका क्रममा अस्पताल, एम्बुलेन्स, पानी, दूध, औषधि लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरुमा अवरोध नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । यस्तै विद्यार्थीहरुको परीक्षा सञ्चालनमा पनि कुनै अवरोध हुनेछैन ।
प्रचण्ड नेपाल पक्षले आन्दोलनका कार्यक्रमबारे जानकारी दिन बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यातायत, पसल, उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना र शिक्षण संस्था बन्द हुने जानकारी दिइयो । पत्रकार सम्मेलनपछि वितरण गरिएको प्रेस वक्तव्यमा यसअघि नै घोषित माघ २८ गते काठमाडौँमा हुने विरोध प्रदर्शन र सभा यथावत राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै माघ २२ गते काठमाडौंमा हुने भनिएको युवा र्याली माघ २८पछि हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्रिविका धेरै तहका परीक्षा चलेकाले परीक्षा केन्द्र र परीक्षा दिन जाने विद्यार्थीका साधनलाई भने नरोकिने भुसालले बताउनुभयो। यातायात, उद्योग कलकारखाना, शैक्षिक संस्था लगायत सबै क्षेत्र बन्द हुने भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
Prevप्रहरीमै उजुरी हाल्नुपर्ने गरी नायिकाद्वय श्वेता र सुष्माबीच किन भयो विवाद ? यस्तो छ घटनाको नालीबेली
Nextभोलि नेपाल बन्दको घोषणा
भाइरल हुनकै लागि यी युवतीले जे खाइन हेर्नुहोस (359)